10 modi per amare il tuo prossimo come te stesso | Io amo Gesù
10zọ iri hụrụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị
Ọnwa ole na ole gara aga, ka anyị na-agagharị na agbata obi anyị, nwa m nwanyị kwuru na a na-ere ụlọ "nwanyị ọjọọ" ahụ. Nwanyị a emeghị ihe ọ bụla nwa m nwoke iji kpọọ aha a. Kaosinadị, e nweghị akara ngosi dịkarịa ala asaa na mbara ala ya. Odika, nwa m nwanyi nuru okwu m kwuru banyere ihe iriba ama ya mere na amuru aha ya. Enwere m nkatọ ozugbo maka omume m.
Amaghị m ọtụtụ ihe banyere nwanyị ahụ bi n'okporo ámá, ma e wezụga na aha ya bụ Mary, ọ tọrọ ma biri naanị ya. M feere ha aka mgbe m gafere, ma akwụsịghị ime ka ha mata m. Nke a bụ obere n'ihi n'eziokwu na m na-arụsi ọrụ ike na oge m nke na anaghị m emepe obi m maka mkpa nwere ike. Ihe ọzọ kpatara ohere a furu efu bu na echere m na o nweghi ihe jikotara m.
Ọdịbendị ndị na-ewu ewu na-akụzikarị ịkwado ndị ọzọ nwere echiche, ọdịmma, ma ọ bụ nkwenkwe ndị yiri ha. Mana iwu Jizọs katụrụ usoro ọdịnala. Na Luk 10, onye ọka iwu jụrụ Jizọs ihe ọ ga-eme iji keta ndụ ebighi ebi. Jisos zara site n’akuko nke ihe anyi kporo, Ezi Onye Sameria.
Lee ihe iri anyị nwere ike ịmụta n’aka nwoke Sameria a banyere ịhụ ndị agbata obi anyị n’anya dịka onwe anyị.
Onye bụ onye agbata obi m?
N’ebe Ọwụwa Anyanwụ ancientwa n’oge ochie e nwere nkewa n’etiti otu dị iche iche. Iro dị n'etiti ndị Juu na ndị Sameria n'ihi esemokwu ọdịnala na nke okpukpe. Ndị Juu maara iwu Agba Ochie ka ha jiri obi ha dum, mkpụrụ obi ha dum, uche ha dum na ike ha hụ Onyenwe anyị Chineke n’anya ma hụkwa ndị agbataobi ha n’anya dịka onwe ha (Diut. 6: 9; Lev. 19:18). Otú ọ dị, nkọwa ha nyere banyere onye agbata obi na-ahụ n'anya nwere nanị nanị ndị sitere n'otu ebe.
Mgbe onye ọka iwu ndị Juu jụrụ Jizọs, "Onye bụ onye agbata obi m?" Jizọs ji ajụjụ a maa echiche nke ụbọchị ahụ. Ilu banyere ezi onye Sameria kọwara ihe mmadụ ịhụ onye agbata obi ya n'anya pụtara. N’akụkọ ahụ, ndị ohi tiri otu nwoke ihe ma hapụ ya n’akwụ n’akụkụ ụzọ. Ka ọ na-edina n’enweghị enyemaka n’okporo ụzọ ahụ dị ize ndụ, otu onye ụkọchukwu hụrụ nwoke ahụ ma jiri anya ya gafere okporo ụzọ ahụ. Mgbe nke ahụ gasịrị, onye Livaị na-emekwa otu ihe ahụ mgbe ọ hụrụ nwoke ahụ na-anwụ anwụ. N’ikpeazụ, onye Sameria hụrụ onye ihe ahụ mere wee meghachi omume.
Mgbe ndị isi ndị Juu abụọ hụrụ onye nọ ná mkpa ma kpachara anya zere ọnọdụ ahụ, onye Sameria ahụ kọwara na ọ bụ ezigbo mmadụ. O meere mmadụ ebere n'agbanyeghị agbụrụ ha, okpukpe ha, ma ọ bụ uru ọ baara ha.
Kedu ka m si hụ onye agbata obi m n'anya?
Site na inyocha akuko nke ezigbo onye Sameria, anyi puru i muta otu esi ahu ndi agbata obi anyi n’anya nke oma site na igosiputa udiri agwa di n’akuko a. Ndị a bụ ụzọ iri anyị onwe anyị ga-ahụ hụ ndị agbata obi anyị n'anya dịka onwe anyị:
1. hụnanya nwere nzube.
N’ilu ahụ, mgbe onye Sameria ahụ hụrụ onye ahụ, ọ gakwuuru ya. Onye Sameria ahụ na-aga ebe ọ bụla, mana ọ kwụsịrị mgbe ọ hụrụ nwoke ahụ nọ na mkpa. Anyị na-ebi n'ime ụwa na-agba oso ebe ọ dị mfe ileghara mkpa nke ndị ọzọ anya. Ma ọ bụrụ na anyị mụta ihe n’ilu ​​a, anyị ga-akpachara anya ka anyị mata ndị nọ anyị nso. Anie esịn Abasi ke esịt man owụt ima?
2. Lovehụnanya na-ege ntị.
Otu n’ime ihe mbụ ga-eme ka mmadụ bụrụ ezigbo onye agbataobi ma hụkwa ndị ọzọ n’anya bụ ka ị hụ ndị ọzọ. Onye Sameria hụrụ nwoke ahụ merụrụ ahụ na nke mbụ ya.
“Ma onye Sameria, ka ọ na-eme njem, bịarutere ebe nwoke ahụ nọ; mb whene ọ huru ya, o we nwe ọmiko n'aru ya. Enye aka ebịne enye ọkọbọp unan esie, ọduọk aran ye wine ke mmọ, ”Luke 10:33.
N’ezie, nwoke a na-eti ihe n’okporo ámá yiri ka ọ bụ ọnọdụ siri ike ịhapụ. Ma Jizọs gosikwara anyị mkpa ọ dị ịhụ mmadụ. Ọ dị ka onye Sameria ahụ na Matiu 9:36: "Mgbe [Jizọs] hụrụ ìgwè mmadụ ahụ, o nwere ọmịiko n'ahụ ha, n'ihi na a kpagburu ha ma na-enweghị enyemaka, dị ka atụrụ na-enweghị onye na-azụ ha."
Kedu otu ị ga - esi raara onwe gị nye ma mara banyere ndị mmadụ na ndụ gị?
3. ishụnanya nwere ọmịiko.
Luk 10:33 gara n'ihu ikwu na mgbe onye Sameria ahụ hụrụ nwoke ahụ e merụrụ ahụ, o nwere ọmịiko n'ahụ ya. Ọ gakwuuru nwoke ahụ merụrụ ahụ wee zaa mkpa ya kama naanị imetere ya ebere. Olee otu ị ga-esi gosipụta ọmịiko n'ahụ onye nọ ná mkpa?
4. respondhụnanya na-aza.
Mgbe onye Sameria ahụ hụrụ nwoke ahụ, ọ zaghachiri ozugbo iji nyere nwoke ahụ aka. Enye ama ada mme n̄kpọ emi enye ekenyenede ọbọp unan esie. Noticedchọpụtala onye ọ bụla nọ na mkpa na obodo gị nso nso a? Kedụ ka ị ga - esi gboo mkpa ha?
5. Ihunanya di oke onu ahia.
Mgbe onye Sameria ahụ lekọtara ọnyá ndị ahụ, o nyere ihe onwunwe ya. Otu n’ime akụrụngwa dị oke ọnụ ahịa anyị nwere bụ oge anyị. Hụ onye agbata obi ya n'anya abụghị naanị na ọ ga-efu onye Sameria ọfụma ụbọchị abụọ, kamakwa oge ya. Chineke nyere anyị akụrụngwa ka anyị wee bụrụ ngọzi nye ndị ọzọ. Kedụ ihe ndị ọzọ Chukwu nyere gị nke ị nwere ike iji gọzie ndị ọzọ?
6. Lovehụnanya adịghị mma.
Weregodị ya na ị na-achọ ibuli nwoke merụrụ ahụ́ n’enweghị uwe n’elu ịnyịnya ibu. Ọ bụghị ọrụ dị mfe ma ọ nwere ike ịdị mgbagwoju anya n'ihi mmerụ ahụ nwoke ahụ nwere. Onye Sameria ahụ aghaghị ịkwado ịdị arọ nwoke ahụ nanị ya. Edi enye emen owo oro odori ke enan̄ esie ada enye aka ebiet emi m safekpemeke. Olee uru i riterela n’aka onye meere gị ihe niile? Enwere ụzọ iji gosipụta agbataobi ịhụnanya, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ naghị adịcha mma ma ọ bụ na ọ dịghị mma?
7. ishụnanya na-agwọ ọrịa.
Mgbe onye Sameria ahụ kechisịrị ọnya nwoke ahụ, ọ gara n'ihu ilekọta ya site n'ịkpọga ya n'ụlọ ndị njem ma lekọta ya. Nye gwọworo ọrịa n'ihi na ị wepụtara oge iji hụ n'anya?
8. ishụnanya na-achụ àjà.
Onye Sameria ahụ nyere onye na-elekọta ebe ahụ mkpụrụ ego dinarịọs abụọ, nke pụtara ihe ruru ụbọchị abụọ e retara. Ma naanị ntuziaka o nyere bụ ilekọta ndị merụrụ ahụ. Enweghị nkwụghachi na nloghachi.
Jennifer Maggio kwuru nke a gbasara ije ozi na-atụghị anya na ihe ọ bụla ga-alaghachi azụ na aritlce ​​ya, "Ihe iri ụka nwere ike ime iji merie ndị ekweghị ekwe:"
“Ọ bụ ezie na ọ bụ ihe dị mma mgbe onye anyị jere ozi nyere anyị ezigbo, obi, daalụ, ọ dịghị mkpa ma ọ bụ achọrọ. Ozi anyị na-ejere ndị ọzọ na nke anyị na-emere ndị ọzọ bụ ihe Kraịst meerela anyị. Ọ dịghị ihe ọzọ. "
Olee ihe ndị ị ga-emere ndị nọ ná mkpa?
9. Lovehụnanya na-ahụkarị.
Ọgwụgwọ maka ndị merụrụ ahụ akwụsịghị mgbe onye Sameria ahụ hapụrụ. Kama ịhapụ nwoke ahụ naanị ya, o nyefere onye nlekọta ụlọ ahụ ọrụ ilekọta ya. Mgbe anyị hụrụ onye agbata obi anyị n'anya, onye Sameria ahụ na-egosi anyị na ọ dị mma na mgbe ụfọdụ ọ dị mkpa itinye ndị ọzọ n'ọrụ. Nye ka ị ga-esonye gosi onye ọzọ ịhụnanya?
10. promiseshụnanya nkwa.
Mgbe onye Sameria ahụ hapụrụ ebe a na-ere ndị ọbịa, ọ gwara onye na-elekọta ebe ahụ a na-elekọta ụlọ oriri na ọ thatụ thatụ na ya ga-akwụ ụgwọ ndị ọzọ niile ma ọ lọta. Onye Sameria ahụ ejighị onye ahụ ihe ọ bụla, n'agbanyeghị nke ahụ o kwere nkwa ịlọghachi ma kwụọ ụgwọ ụgwọ nlekọta ọ bụla nwoke ahụ chọrọ. Mgbe anyị hụrụ ndị ọzọ n'anya, onye Sameria ahụ na-egosi anyị ịgbaso nlekọta anyị, ọ bụrụgodị na iwu ejighị anyị. Onwere onye ị ga-echigharịkwuru iji gosipụta na ị hụrụ ya n’anya?
EGO! 11. ishụnanya na-eme ebere.
“'N'ime mmadụ atọ a, ì chere na ọ bụ onye agbata obi nke nwoke ahụ dabara n'aka ndị ohi?' Ọkachamara iwu zara, sị: "Onye ahụ nwere ọmịiko n'ahụ ya." Jizọs sịrị ya, “Gaa me otu ihe ahụ” Luk 10: 36-37.
Mbụk owo Samaria emi edi eke owo kiet emi akatuade owo mbọm. A kọwara nkọwa John MacArthur nke ebere na edemede a Crosswalk.com, "Ihe Ndị Kraịst kwesiri ịma maka ebere."
“Ebere na-ahụ nwoke n’enweghị nri ma na-enye ya nri. Ebere na-ahụ onye na-arịọ maka ịhụnanya ma nye ya ịhụnanya. Ebere na-ahụ mmadụ naanị ya ma na-enye ha ụlọ ọrụ. Ebere na-egbo mkpa ahụ, ọ bụghị naanị ịche ya, "MacArthur kwuru.
Onye Sameria ahụ gaara anọgide na-eje ije mgbe ọ hụrụ mkpa nwoke a, ma o nweziri ọmịiko. Ọ ga-abụ na ọ gara n'ihu na-eje ije mgbe o nwere ọmịiko. Anyị niile na-eme nke a oge niile. Ma o mere ihe banyere ọmịiko ya ma gosipụta ebere. Ebere na eme ebere.
Ebere bụ ihe Chineke mere mgbe o nwere ọmịiko na ịhụnanya n’ebe anyị nọ. N’amaokwu ahụ a ma ama, Jọn 3:16, anyị hụrụ na Chineke na-ahụ anyị ma hụ anyị n’anya. O mere ebere na ịhụnanya site na iziga onye nzọpụta.
"N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a, na O nyere ọbụna Ọkpara Ọ mụrụ naanị Ya, ka onye ọbụla kwere na Ya wee ghara ịnwụ kama nwee ndụ ebighi ebi".
Olee ihe onye agbata obi gị chọrọ nke na-eme ka ị ghara inwe ọmịiko? Ebere dị a couldaa pụrụ isonye mmetụta ahụ?
Hụnanya anaghị ele mmadụ anya n’ihu.
Onye agbata obi m bụ Mary na-akwagala na ezinụlọ ọhụrụ zụtara ya ụlọ. Ọ bụ ezie na enwere m ike ịmụrụ amamikpe maka mmeghachi omume dị ka onye nchụàjà ma ọ bụ onye Livaị ahụ, ana m agbagha onwe m ka m mesoo ndị agbata obi m ọhụrụ dịka onye Sameria ahụ ga-eme. N'ihi na ịhụnanya adịghị ele mmadụ anya n'ihu.
Cortney Whiting bụ nwunye dị ike na nne nwere ụmụ abụọ. Ọ natara Nna-ukwu ya na Theology na Dallas Theological Seminary. N'ịbụ onye jere ozi na chọọchị ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 15, Cortney na-eje ozi ugbu a dị ka onye ndu nkịtị ma na-ede maka minista dị iche iche nke Ndị Kraịst. Nwere ike ịchọta ọrụ ya na blọọgụ ya, Ngosipụta amara.
Iji nwetakwuo ihe ọmụma banyere otu esi ahụ onye agbata obi gị n'anya, gụọ:
10 ayszọ Tohụ Onye Agbata Obi Gị n'Anya n'agbalịghị Iche: “Obi m mara m ikpe n'ihi iwu Kraịst nyere onye agbata obi m n'ihi na amaghịdị m ọtụtụ n'ime ndị gbara m gburugburu. Enwerem m ihe ngọpụ nile dị n’akwụkwọ a maka na m ahụghị onye agbata-obi m n’anya, mana enweghị m ike ịchọta nkebi ahịrịokwu ewepụrụ n’iwu nke abụọ kachasị ukwuu, Matiu 22: 37-39. Mgbe mụ na Chineke sere okwu ruo ọtụtụ ọnwa, m mechara kụọ aka n’ụlọ ndị agbata obi m ma gwa ha ka ha coffeeụọ kọfị na tebụl ebe m na-esi nri. Achọghị m ịbụ anụ ọhịa ma ọ bụ onye na-agba agba ara. Achọrọ m ịbụ enyi ha. Ndị a bụ ụzọ iri dị mfe ị ga-esi hụ onye agbata obi gị n'anya na-enweghị iju. "
Wayszọ asaa iji hụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị: "Ekwenyesiri m ike na anyị niile na-esonyere otu ndị sitere n'ọnọdụ ma ọ bụ ọnọdụ ndụ ma jupụta na ọmịiko na ịhụnanya maka ha. Ọ na-adịrị anyị mfe ịhụ ndị agbata obi anyị n'anya dị ka anyị hụrụ onwe anyị. Ma ọ bụghị mgbe nile ka ọmịiko anyị nwere n’ebe ndị mmadụ nọ na-akpali anyị, karịsịa ndị ihe isi ike ná ndụ anyị. Lee ụzọ asaa dị mma anyị pụrụ isi hụ ndị agbata obi anyị n'anya n'ezie. ”
Ndi edi idiọkn̄kpọ ndibụp Abasi?